(trg)="1.3"> ဇူလိုင်လတွင်မော်ရိုကိုကျောင်းသားတစ်စုသည်" ပညာရေးစနစ်ကို ပြောင်းလဲမည့် မော်ရိုကိုကျောင်းသားသမဂ္ဂ " ( ပြင်သစ်စကားဖြင့် အတိုကောက်UECSE ) ဟုခေါ်သည့် ဖေ့( စ်) ဘွတ်( ခ်) စာမျက်နှာကို ဖွင့် လှစ်ခဲ့သည်။
(trg)="1.4"> ထိုအဖွဲ့သည်" ပညာရေးစနစ်ကို တိုးတက်စေရန်ခိုင်မာသော နည်းလမ်းများကို ဆွေးနွေးဆောင်ရွက်မည့် " မော်ရိုကိုလူငယ်များကို စုစည်းလျက်ရှိသည်။
(src)="3.1"> Lo slancio dell' iniziativa è stato alimentato dalla diffusione delle notizie in cui si dice che il governo starebbe rendendo più severe le politiche educative dell' università pubblica .
(trg)="3.1"> ထိုလှုပ်ရှားမှုအဟုန်ကို အစိုးရတက္ကသိုလ်များတွင်ကျောင်းလခမူကို အစိုးရက ပိုမိုတင်းကျပ်နိုင်ဖွယ်ရှိသည်ဟူသော သတင်းက အားဖြည့် ပေးလိုက်ပုံရသည်။
(trg)="6.1"> ဆန္ဒပြခြင်းမစမီ ယူကျူ့ပေါ်သို့ယင်းအဖွဲ့မှ တင်ခဲ့သော ဗီဒီယိုတစ်ခုတွင်ကျောင်းသားများက ပညာရေးစနစ်အတွက်သိသာသောပြောင်းလဲမှုများကို တောင်းဆိုထားကြသည်။
(trg)="6.2"> " ပညာရေးစနစ်တစ်ခုလုံးက ပြောင်းဖို့လိုနေတာပါ " ဟု ကျောင်းသားတစ်ယောက်က ကင်မရာကိုကြည့် ၍ ပြောသည်။
(trg)="6.3"> " ဒီစနစ်တစ်ခုလုံးကို အားလုံးပိုင်းချလိုက်ပြီး ဟိုးအစကနေ ပြန်တည်ဆောင်ဖို့လိုတယ်" ဟု အခြားတစ်ယောက်က ဆိုသည်။
(trg)="6.4"> ဗီဒီယိုတွင်ပါဝင်ကြသော ကျောင်းသားအများအပြားက ဂုဏ်သိက္ခာရှိ Grandes Ecolesက တင်ပြသည်များတွင်အကျိုးမရှိသော အဟန့် အတားများ ၊
(trg)="7.2"> ဗီဒီယိုများအရ ရာချီသောကျောင်းသားများနှင့် ၄င်းတို့၏ မိဘများက တုံ့ပြန်ခဲ့ကြသည်။
(trg)="9.3"> ခွင့် ပြုချက်ဖြင့် အသုံးပြုထားသည်။
(trg)="10.3"> ခွင့် ပြုချက်ဖြင့် အသုံးပြုထားသည်။
(trg)="12.1"> ဆန္ဒပြမှုသည်ငြိမ်းချမ်းစွာ ပြီးဆုံးသွားခဲ့သည်။
(trg)="13.1"> တမ်ဘလာတွင်လည်း UECSE ကရေးသားခဲ့သည်မှာ ၊
(trg)="13.2"> လူငယ်ကျောင်းသားတွေက ပညာရေးစနစ်ကောင်းတစ်ခုကို တောင်းဆိုနေကြတာ ၊
(trg)="13.3"> သူတို့တွေက မော်ရိုကိုကျောင်းသားတွေ ၊
(trg)="1.2"> ဂရပ်( ဖ်) တီဆိုသောစာလုံးသည်ရေးသားသည်ဟု အဓိပ္ပာယ်ရသော ဂရပ်ဖိန်းဟူသည့် ဂရိစာလုံးမှ ဆင်းသက်လာခြင်းဖြစ်သည်။
(trg)="2.2"> အာဏာပိုင်များမှာ ဂရပ်( ဖ်) တီများကို ဖျက်ပစ်ရန်အတွက်ငွေကြေးမြောက်မြားစွာ သုံးစွဲရသည်ဆိုသော်လည်း ထိုလမ်းပေါ်ကအနုပညာမှာ အခြားနိုင်ငံများသို့ပျံ့နှံ့သွားခဲ့ပြီး မြို့ပေါင်းများစွာရှိ မြို့ပြရပ်ဝန်းတွင်လူသိများလာခဲ့သည်။
(trg)="2.3"> အချို့မှာ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ စာသားများကို ထင်ရာခြစ်သွားခြင်းများဖြစ်ပြီး အခြားတို့မှာ အနုပညာအစစ်များဖြစ်သည်။
(trg)="3.1"> ဖိုဂိုနဇို ( စ်) ဘလော့( ဂ်) ကဲ့သို့ဝက်( ဘ်) စာမျက်နှာပေါင်းများစွာက ထိုလမ်းပေါ်ကအနုပညာအမျိုးအစားကို ခင်းကျင်းပြသရန်၄င်းတို့၏ အကြောင်းအရာများကို အထူးပြုသုံးခဲ့ကြသည်၊
(trg)="4.1"> အနာအဆာတွေကို စားပါစေ " ဟု ရေးထားသော နယူးယော့( ခ်) မြို့မှ ဂရပ်( ဖ်) တီ ။
(trg)="4.2"> ဖလစ်ကာအသုံးပြုသူ အိုမီဆို ၏ ဓာတ်ပုံ
(trg)="6.1"> မန်ချက်စတာမြို့၊
(trg)="6.2"> ယူကေတွင်ဆွဲထားသော " လူချမ်းသာတွေနှင့် အာဏာရှင်တွေက ငါတို့ကို ရှုံ့ချတာကို သတင်းဌာနတွေက မိုးရွာနေတယ်လို့ပြောနေကြတယ်"
(trg)="8.2"> ဂရန်ဒါ ၌ လမ်းလျှောက်သွားရာတွင်မြင်တွေ့နိုင်သော ဂရပ်( ဖ်) တီလှုုိင်းကို ဖော်ပြနေသည်။
(trg)="8.3"> အားကောင်းသော ပုံများနှင့် စာပိုဒ်များက နိုင်ငံ ၏ နိုင်ငံရေးနှင့် စီးပွားရေးစနစ်ကို ကိုးကားထားသည်။
(trg)="9.1"> တတိယဓာတ်ပုံတွင်PP ( စပိန်လူကြိုက်များသော ပါတီ ) နှင့် PSOE ( စပိန်ဆိုရှယ်လစ်အလုပ်သမားပါတီ ) ဟူသော စာလုံးများကို တွေ့ရမည်ဖြစ်သည်။
(trg)="9.2"> စပိန်နိုင်ငံ ၏ လူသိအများဆုံး နိုင်ငံရေးပါတီနှစ်ခု ၏ အတိုကောက်စာလုံးများကို အမှတ်တံဆိပ်တစ်ခုအတွင်းတွင်ထည့် သွင်းထားသည်။
(trg)="9.3"> ပါတီနှစ်ခုမှာ အတူတူပင်ဖြစ်သည်ဟု ဆိုလိုရင်းဖြစ်ပြီး နှစ်ပါတီစနစ်ကို ထုတ်ဖော်ပြသနေသည်။
(trg)="9.4"> ကြက်များပါသော ရုပ်ပုံကားချပ်အကြီးတစ်ခုကိုလည်း " Gente presa , mercado libre " ( လူတွေက လွတ်လပ်တဲ့ဈေးကွက်မှာ အစာရှာထွက်နေကြတယ်) ဟူသော စာတန်းနှင့် အတူ တွေ့ရမည်ဖြစ်သည်။
(trg)="11.1"> " ဝမ်းမြောက်စွာ သုံးစွဲခြင်း "
(trg)="13.1"> " လူထု အတွက်ခုခံကာကွယ်ခြင်း "
(trg)="14.1"> " ပညာရေးသည်ရောင်းရန်မဟုတ်"
(trg)="16.2"> သူသည်မြို့တော်၏ နံရများပေါ်တွင်ထွင်းရေးထားသော ကာရန်အပိုဒ်များ ၏ ဓာတ်ပုံကို ပြသသည့် နယ်အိုရာဘီအိုဆို နှင့် ဘာတာနီယားဟုခေါ်သော ဘလော့( ဂ်) နှစ်ခု ၏ စာရေးသူဖြစ်သည်။
(trg)="18.2"> ဘယ်သူ့ကို ညီအောင်လုပ်ပြီး ဘယ်တော့ညီအစ်ကို ဖြစ်မှာလဲ " ( ကျော်ကြားသော ပြင်သစ်စကားလုံးများဖြစ်သည့် Liberté , Egalité , Fraternitéတို့ကို ကစားထားခြငး်။
(trg)="19.6"> ဘလော့( ဂ်) များနှင့် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာလမ်းပေါ်က အနုပညာကဲ့သို့ဖေ့( စ်) ဘွတ်( ခ်) စာမျက်နှာများဆီသို့ရောက်ရှိခဲ့ပြီဖြစ်သည်။
(trg)="1.2"> အမည်မသိအဖွဲ့မှ လိင်တူချစ်သူအခွင့် အရေးကို ထောက်ခံအားပေး ၊
(trg)="1.3"> အစိုးရဝက်( ဘ်) ဆိုက်များကို တိုက်ခိုက ်
(trg)="1.4"> " အမည်မသိ " ဆိုသောနာမည်ဖြင့် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ကွန်ပျူတာဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ ခိုးဖောက်၀င်ရောက်သူ အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့သည်ယူဂန်ဒါ နိုင်ငံပိုင်၀န်ကြီးချုပ်၀က်ဘ်ဆိုဒ်ကို ခိုးဖောက်၀င်ရောက်ခဲ့သည်။
(trg)="3.1"> ယင်းအဖွဲ့သည်၀န်ကြီးချုပ်၀က်ဘ်ဆိုဒ်ကိုထိန်းချုပ်၍ ယူဂန်ဒါနိုင်ငံ ၏ ပထမဆုံး လိင်တူချစ်သူတန်ဖိုးမြှင့် တင်ရေး နှင့် တရား၀င်အသိမှတ်ပြုရေးပွဲ ရက်သတ္တပတ်မှ ဓါတ်ပုံများကို ထို၀က်ဆိုဒ်ပေါ်တွင်တင်ခဲ့ကြသည်။
(trg)="3.2"> လိင်တူချစ်သူများသို့၀န်ကြီးချုပ်ထံမှ တောင်းပန်စာကိုလည်း ဖန်တီးတင်ခဲ့ကြသည်။
(trg)="5.1"> အစိုးရမှ လိင်တူချစ်သူများကို အများပြည်ကဲ့သို့တန်းတူညီတူ မဆက်ဆံသရွေ့၄င်းတို့၏ ယူဂန်ဒါအစိုးရ၀က်ဘ်ဆိုဒ်များ နှင့် ဆက်သွယ်ရေးများ အပေါ်အဓိကထားတိုက်ခိုက်မှု ယူဂန်ဒါစီမံချက်များကို လုပ်ဆောင်နေဦးမည်ဖြစ်ကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်။
(trg)="8.2"> အောက်တိုဘာလ ၁၄ရက်နေ့တွင်လွှတ်တော်အမတ်တစ်ဦးဖြစ်သော ဒေးဗစ်ဘာဟတီသည်လိင်တူချစ်ခြင်း နှင့် လိမ်တူဆက်ဆံသည်ဟုယူဆရ သူများအား သေဒဏ်ချမှတ်ရန်သို့မဟုတ်တသက်တစ်ကျွှန်း ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ရန်ဟူသော လိင်တူချစ်သူဆန့် ကျင်ရေး ပြစ်ဒဏ်( မိန်မလျာများကို သတ်သော ပြစ်ဒဏ်ဟုလည်း လူသိများသည်) ကို စတင်သတ်မှတ်ခဲ့သည်။
(trg)="8.4"> အကြမ်းဖက်ကန့် ကွက်မှု များ ရှိခဲ့ပြီးနောက်ယခုနှစ်ဖေဖော်၀ါရီလတွင်ဘာဟတီက ထိုပြစ်ဒဏ်ကို အနည်းငယ်ပြန်လည်ပြုပြင်သတ်မှတ်ခဲ့သည်။
(trg)="9.3"> နေ့တွင်ပြောကြားခဲ့သည်မှာ
(trg)="10.1"> ဒီနေ့၀န်ကြီးချုပ်၀က်ဘ်ဆိုဒ်ကို ခိုးဖောက်၀င်ရောက်ထိန်းချုပ်ခဲ့မှုဟာဆိုရင်ယူဂန်ဒါ အစိုးရရဲ့လိင်တူချစ်သူများကို ရာဇ၀တ်သင့် စေခြင်း အပေါ်တန်ပြန်တုံ့ပြန်ခဲ့တဲ့ယခုနောက်ဆုံးဆောင်ရွက်ချက်ဖြစ်ပါတယ ်
(trg)="11.6"> အမည်မသိအဖွဲ့၏ လှုပ်ရှားမှုများသည်ယူဂန်ဒါရှိ လိင်တူချစ်သူများအရေး တက်ကြွလှုပ်ရှားသူများအား ထိခိုက်လာမည်ကို စိုးထိတ်နေသည်။
(trg)="12.1"> လိင်တူချစ်သူ ဆန့် ကျင်ရေးသမားဖြစ်တဲ့ယူဂန်ဒါအစိုးရကို ဆန့် ကျင်တဲ့ဆန္ဒထုတ်ဖော်မှုအကုန်လုံးကို ကျွန်တော်အားပေးထောက်ခံနေပေမဲ့ဒီကိစ္စက တန်ဖိုးမြှင့် တင်ပွဲမှာတုန်းက သတ္တိရှိရှိနဲ့သူတို့မျက်နှာတွေထုတ်ပြခဲ့တဲ့လိင်တူချစ်သူများအသိုင်းအဝိုင်းက တက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေကို နောက်ပြန်သွားစေမှာကိုတော့စိုးရိမ်မိပါတယ်။
(trg)="12.2"> ယူဂန်ဒါ လိင်တူချစ်သူ အသိုင်းအဝိုင်းက ပါဝင်ပတ်သက်နေတဲ့ဒီထိခိုက်လွယ်တဲ့ကိစ္စရပ်တွေကို သူတို့တွေ မစဉ်းစားမိခဲ့ဘူးရယ်လို့စိုးရိမ်တာပါ ။
(trg)="12.4"> ကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့အမည်မသိအဖွဲ့ဟာ ယူဂန်ဒါ လိင်တူချစ်သူအရေး ဆောင်ရွက်သူတွေနဲ့ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းခြင်းမရှိဘဲ သူတို့လုပ်ချင်တာကို လုပ်တဲ့အပြုအမူကိုပါပဲ ။
(trg)="12.5"> SMUG ဒါမှမဟုတ်အဲလိုမျိုး တခြား အဖွဲ့အစည်းတွေ သူတို့ကို ဒီလိုစေခိုင်းလို့လား ။
(trg)="12.6"> သူတို့ရဲ့လုပ်ရပ်က ယူဂန်ဒါလူမျိုးတွေအပေါ်ဘယ်လိုသက်ရောက်စေမလဲ ဆိုတာကို နားမလည်လို့ပဲလား ။
(trg)="12.8"> သူတို့သူများတွေဆီက အကြံညဏ်ယူဖို့လိုနေပြီ ။
(trg)="12.9"> ကောင်းစေချင်တဲ့ဆန္ဒနဲ့လုပ်ဆောင်တာဖြစ်ပေမဲ့က တကယ်တက်ကြွဆောင်ရွက်နေတဲ့သူတွေကိုကို ပြင်းထန်စွာထိခိုက်စေနိုင်ပါတယ်။
(trg)="12.10"> လိင်တူချစ်သူတွေကို ကူညီချင်လို့ဆိုပြီး အစိုးရ ၀က်ဘ်ဆိုဒ်ကို ခိုးဖောက်၀င်ရောက်တယ်လား ။
(trg)="12.11"> ဘယ်သူက အဲဒီလိုလုပ်တာလဲ ။
(trg)="12.13"> ဖိုမစိတ်ပြောင်းသူများအရေးကို တကယ်တက်ကြွဆောင်ရွက်နေသူများနဲ့ဆွေနွေးဖို့အကြံပေးချင်ပါတယ်။
(trg)="12.14"> နသန်ကလည်း ၀က်ဘ်ဆိုဒ်ပေါ်တွင်အဖွဲ့မှ အသုံးပြုထားသော ဓါတ်ပုံသည်အန္တရ့ာယ်များကြောင်း ထောက်ပြပြောဆိုခဲ့သည်။
(trg)="13.1"> အမည်မသိ အဖွဲ့က အသုံးပြုခဲ့တဲ့၊
(trg)="13.3"> အခုလို ၀တ်စားပုံမျိုးနဲ့ပုံကို မသုံးသင့် ပါဘူး ။
(trg)="13.8"> ၄င်းအဖွဲ့၏ တွစ်တာအကောင့် တစ်ခုမှ ၄င်းတို့၏ လုပ်ဆောင်ချက်ကို အောင်ပါအတိုင်း ခုခံပြောဆိုထားသည်ကို တွေ့ရသည်။
(trg)="13.10"> အမည်မသိအဖွဲ့မှ ယူဂန်ဒါ ငရုတ်ကောင်းနီ သတင်းစာ၀က်( ဘ်) ဆိုဒ်၊
(trg)="13.11"> စတော့လဲလှယ်မှု ၀က်( ဘ်) ဆိုဒ်နှင့် အကျဉ်းထောင်၀န်ဆောင်မှု ဆိုင်ရာ ၀က်( ဘ်) ဆိုဒ်များကို ပစ်မှတ်ထားရှိကြောင်း ဖော်ပြထားသော မှတ်တမ်းများလည်း ရှိသည်။
(trg)="13.13"> ၂၀၀၆ ခုနှစ်ဩဂုတ်လတွင်ငရုတ်ကောင်းနီမှ ယူဂန်ဒန်လိင်တူချစ်သူဟု ယူဆရသူများ ၏ အမည်များကို ထုတ်ဝေဖော်ပြခဲ့သည်။
(trg)="13.14"> @ PinkNinj4 : ohai @ RedPepperUG မင်း လိင်တူချစ်သူ နာမည်တွေနဲ့လိပ်စာတွေကို ၂၀၀၉ ခုနှစ်မှာ ဖော်ပြခဲ့တာ မှတ်မိသေးလား ?
(trg)="13.15"> ငါတော့မမေ့သေးဘူး အခု မင်းဆိုက်က ကြမ္မာဆိုး၀င်ပြီ x # OpFuckUganda
(trg)="1.1"> ဆော်ဒီအမျိုးသမီးအာကစားသမားများ - အိုလံပစ်မှအပြန်တွစ်တာမုန်တိုင်းထန ်
(trg)="4.1"> စိတ်ဓာတ်ခွန်အား
(trg)="5.1"> အောက်တွင်ဖော်ပြထားတာသည်မှာ ဆော်ဒီတွစ်တာအသုံးပြုသူတစ်ဦးက အားကစားသမားနှစ်ဦးစလုံးအတွက်ထောက်ခံအားပေးထားသော တွစ်တာစာတိုနမူနာများပင်ဖြစ်သည်။
(trg)="8.1"> အလီ ခဒရာ ရေးသည်မှာ ၊
(src)="6.2">‏ @aykcanvas : Non tutto è sempre d' oro !
(trg)="9.2"> အမြဲတမ်းရွှေဆိုတာချည်းမှမဟုတ်ပါဘူး ။
(trg)="9.3"> မင်းလုပ်ခဲ့တာက ပိုပြီးကြီးကျယ်ပါတယ်။
(trg)="9.4"> ကျေးဇူးတင်ပါတယ်# SaraAttar # Wejdan # Wijdan .
(trg)="9.7"> ဘဒါ အလ်ဂျီဟာနီက ဂုဏ်ယူစွာပြောသည်မှာ ၊
(trg)="9.9"> # SaraAttar ဆော်ဒီအားကစားအဖွဲ့မှာ ပါဝင်တဲ့သူတွေအားလုံးထက်ပိုပြီး မင်းနဲ့ဝိုဒန်အတွက်ငါတို့ဂုဏ်ယူပါတယ်။
(src)="7.3"> Grazie per l' ispirazione #SaraAttar http:/ /twitpic.com/ agw7nn
(trg)="9.10"> ဆာရာ အတ္တာ ကိစ္စဟာ ကမ္ဘာ့အဆင့် ရေပန်းစားနေပြီ ။
(trg)="9.11"> # SaraAttar ။
(src)="7.4"> Siete un disonore per noi !
(trg)="9.12"> တွစ်တာပေါ်က @ WordWizard ရေးထားခြင်းဖြစ်သည်။
(src)="9.1"> Tra questi c'è l' utente Twitter Faisal Abuthnain , il quale scrive :
(trg)="9.15"> @ NadaAbu တစ်နေ့မှာ ငါ့ကို တီဗွီဖန်သားပြင်ပေါ်မှာ အောင်မြင်သူတစ်ယောက်အနေနဲ့တွေ့ရစေမယ်။
(src)="10.2"> No , lo fanno solo perché hai infranto le regole della tua società , gli insegnamenti religiosi , i consigli delle persone sagge della tua societàele norme dell' Hijab !
(trg)="10.1"> အခြားတစ်ဖက်တွင်ဆော်ဒီမှ တွဒ်တာ အသုံးပြုသူအချို့က အားကစားသမား နှစ်ဦးပါဝင်ခဲ့မှုကို ဆန့် ကျင်ခဲ့ကြပြီး အားကစားသများ ၏ မိသားစုနှင့် အာဏာပိုင်များကို ဘုရင့် နိုင်ငံတော်အမည်နဲ့ဂုဏ်သိက္ခာကို ကျဆင်းစေရန်ခွင့် ပြုခဲ့သည်ဟုဆိုကာ အပြစ်တင်ခဲ့သည်။
(trg)="11.4"> အဲဒါဟာ ဘာလို့လဲဆိုတော့မင်းဟာ မင်းရဲ့လူ့အဖွဲ့အစည်း စည်းကမ်းတွေကို ချိုးဖောက်တယ်၊
(trg)="11.5"> မင်းဘာသာတရားရဲ့သင်ကြားမှုတွေကို ချိုးဖောက်တယ်၊
(trg)="13.3"> ( ၁ ) ဒေသစွဲ ( ၂ ) လူမျိုးစွဲ နဲ့( ၃ ) လိင်စွဲ တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။
(trg)="16.1"> နောက်ဆုံးမှာတော့နူရာက နှိုင်းနှိုင်းဆဆ ပြောသွားသည်မှာ ၊
(trg)="1.1"> အင်​ တာ ​ နက်လွတ်လပ်​ ခွင့် ကြေညာ ​ စာ ​ တမ်း
(trg)="1.2"> အားလုံးသတိပြုမိကြတဲ့အတိုင်းပဲ ကမ္ဘာကြီးဟာ အင်တာနက်လွတ်လပ်ခွင့် နဲ့ပတ်သက်လာရင်အရေးပါတဲ့အချိန်ကို ရောက်နေပါပြီ ။
(trg)="1.3"> ဘလော့ဂ်ရေးသူတွေက ထုတ်ဖော်ပြောဖို့စွန့် စားနေရတဲ့အချိန်မှာ ကမ္ဘာတစ်ဝန်းမှာရှိတဲ့နိုင်ငံတွေမှာ အင်တာနက်ကို ဆင်ဆာဖြတ်ဖို့ဥပဒေအသစ်တွေကို ဖန်တီးနေကြပါတယ်။
(trg)="3.1"> ဒီကိစ္စအတွက်နဲ့အင်တာနက်လွတ်လပ်ခွင့် ကြေညာစာတမ်းကို ဖန်တီးဖို့အဖွဲ့အစည်းတော်တော်များ ⁠ များက လတ်တလောမှာ လှုပ်ရှားခဲ့ကြပါတယ်၊
(trg)="3.3"> ဒီနေ့အထိ အဲဒီကြေညာစာတမ်းကို အဖွဲ့အစည်းနဲ့လုပ်ငန်းပေါင်း ၁၃၀၀ကျော်က လက်မှတ်ရေးထိုးပါဝင်ခဲ့ပြီး ဆက်ပြီးတော့လည်း လက်မှတ်ထိုးနေဆဲ ဖြစ်ပါတယ်။
(trg)="6.2"> ၄င်း တို့သည်တိုက်ခိုက်ဆောင်ယူရန်ထိုက်တန်သည်ဟု ယုံကြည်သောကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။
(trg)="7.7"> အင်တာနက်ကသာ ၄င်းတို့ကို အမှန်တကယ်ဖြစ်လာစေရန်လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းရှိ ၍ ဖြစ်ပါသည်။
(trg)="8.1"> အင်တာနက်ကို လွတ်လပ်၍ ပွင့် လင်းမြင်သာစွာ ဆက်လက်တည်ရှိစေရန်ကျွန်ုပ်တို့နှင့် ပူးပေါင်းပါဝင်ကြပါ ။
(trg)="10.1"> ကျွန်ုပ်တို့သည်လွတ်လပ်၍ ပွင့် လင်းမြင်သာသော အင်တာနက်အတွက်ရပ်တည်ပါသည်။
(src)="6.1"> Fate in modo che questi princìpi vengano discussi come solo Internet può fare – che siate d’accordo o meno, parlatene in giro, traduceteli, fateli vostrieallargate la discussione nella vostra comunità.
(trg)="11.1"> ကျွန်ုပ်တို့သည်အင်တာနက်ပေါ်လစီကိုဆောင်ရွက်ရာနှင့် အခြေခံမူဝါဒ ငါးချက်ကို တည်ဆောက်ရန်အတွက်ပေါ်လွင်၍ အများပါဝင်နိုင်သော လုပ်ရပ်များကို အားပေးထောက်ခံပါသည်။
(trg)="12.2"> အင်တာနက်ကို ဆင်ဆာမဖြတ်ရန ်
(trg)="13.1"> ရယူအသုံးပြုခြင်း ၊
(trg)="14.1"> ပွင့် လင်းမြင်သာမှု ၊
(trg)="14.2"> အင်တာနက်ကို လူတိုင်းက လွတ်လပ်စွာ ချိတ်ဆက်နိုင်၊
(trg)="16.1"> တစ်ဦးချင်းလွတ်လပ်ခွင့် ၊
(src)="1.1"> Messico : ricamare per la Pace
(trg)="2.1"> အပ်ချည်များ ၊
(src)="1.2"> Tessuti , aghiefili sono stati trasformati in guerrieri per la pace in Messico .
(trg)="2.2"> အပ်များနှင့် ပိတ်ထည်များသည်မက္ကစီကိုတွင်ငြိမ်းချမ်းရေး သူရဲကောင်းများ ဖြစ်လာကြသည်။
(src)="1.2"> La disputa marittima con la Cina ha costretto le Filippinearivedere le proprie strutture difensive .
(trg)="1.2"> ဤ ​ အပုဒ်​ သည်နိုင်ငံတကာ ဆက်ဆံ ​ ရေး ​ နှင့် လုံခြုံ ​ ရေး အထူး ​ ရေးသား ​ မှု ​ ၏ တစ်​ စိတ်​ တစ်​ ပိုင်း ​ ဖြစ်​ ပါ ​ သည်။
(src)="1.3"> La tensione è aumentata all' inizio di quest' anno quando PechinoeManila si sono scambiate accuse reciproche sul tentativo di occupare illegalmente le acque territoriali vicino alle isole di Scarborough Shoal , che si trovano nel mar cinese meridionale .
(trg)="4.2"> သမ္မတ ဘန်​ နီ ​ ဂ ​ နို အကွီ ​ နို ​ က ​ ပင်မ ​ ကြာ ​ သေး ​ မီ ​ က နိုင်ငံကိုပြောကြားသော အမျိုးသား ​ မိန့် ခွန်းတွင်ထို ​ အကြောင်း ​ ကို အရွှန်း ​ ဖောက်​ ၍ ပြော ​ ကြား ​ ခဲ့​ သည်မှာ ၊